Fanadihadiana momba ny satan'ny fampandrosoana ny tsena amin'ny indostrian'ny fanamboarana entana amin'ny taona 2020
Natosiky ny fivoarana ara-toekarena manerantany sy ny fangatahan'ny tsena, ny indostrian'ny entana eto amin'ny fireneko dia nivelatra haingana tao anatin'ny folo taona lasa, ary ny fitomboan'ny tinady dia nitondra ny ankamaroan'ny orinasa mpanamboatra entana amin'ny làlan'ny fampandrosoana haingana. Raha ny fahitana ny maodelin'ny orinasa, ny lug domestic ...
Mpanjifa maro no mitady orinasa am-paosy izay manantena fa hahazo teny nalaina haingana araka izay azo atao amin'ny kitapom-batsy nomen'izy ireo. Na izany aza, noho ny antony maro samihafa dia sarotra ho an'ny mpanamboatra ny manome anao teny nalaina tena marina tsy misy antsipirian'ny santionany na kitapo. Raha ny marina, misy ny fomba hahazoana ...
Mino aho fa hiatrika ny olan'ny famandrihana farafahakeliny ny olon-drehetra rehefa mitady mpanamboatra hanamboarana kitapo kitapo. Maninona ny orinasa tsirairay no manana fepetra takiana MOQ, ary inona no fatra ambany indrindra ao anaty indostrian'ny fampanjariana? Ny isa farafahakeliny ho an'ny cust ...
Fantaro ao anatin'ny iray minitra ny fizotry ny famokarana kitapo
Raha miresaka ny fizotry ny famokarana kitapom-batsy dia maro ny olona mety mieritreritra fa ny fizotry ny famokarana kitapom-batsy sy ny fitafiana dia mitovy, aorian'izay, ny milina fanjairana dia ampiasaina ho azy roa. Raha ny marina dia diso io hevitra io. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fizotran'ny kitapo sy akanjo. Ao amin'ny co ...
Kitapom-batsy LOGO namboarina
Ny fomba fanontana LOGO amin'ny fanaingoana ny kitapo dia olana iray matetika. Mba hanamafisana ny kolontsain'ny orinasa sy hanasongadinana ny sarin'ny orinasa, ny fanontana LOGO dia tena zava-dehibe. Manokana, ny famolavolana orinasa sasany dia sarotra kokoa ary mila ampiharina wit ...